Uhlela iholidi eGreece libalele? Jabulela okudliwa lolwandle iholidi? Ngoba wena, akukhona ebalulekile engekho izinyathelo ezimbili kude nedlanzana disco ezinomsindo, imigoqo kanye zokudlela? Ungathanda ukuba uchithe amaholidi kwakho ejabulela imvelo nolwandle, awusebenzi ikakhulukazi abafuna ukusebenzisa ngayo imali ku ehhotela? Khona-ke, njengoba indawo sokuzilibazisa ngempela cabanga ehhotela ezintathu-star "Siagas Beach."
Siagas Beach Ihhotela 3 *: izithombe, incazelo
"Siagas Beach" isendaweni ogwini Saronic Gulf 60 ukusuka e-Athene km 20 kusuka Loutraki. Itholakala emaphandleni, kude umsindo befuna. Ibanga ukusuka Athens sezindiza ingamakhilomitha angu-75. Eduze ehhotela kukhona sebhasi. Kusuka lapha ungakwazi kalula uthole Loutraki eGreece enhlokodolobha. Amabhasi ukusebenzisa ngohlelo ongazithatha edilini lomshado edilini lomshado.
Siagas Beach akuyona ihhotela entsha. Nokho, njalo othola ukulungiswa. Ngakho-ke, it is kahle kugcinwe futhi ihlanzekile. Lesi sakhiwo ihhotela yokuhlala 101 amakamelo. Kukhona 1-, 2- kanye 3-Igumbi Suites. Zonke anemisila ifenisha kudingekile, TV, ucingo, umshini ongenisa umoya, efrijini mini, yokugezela, kuvulandi. Zonke amakamelo khulula Wi-Fi. inkonzo Maid inikezwa katsatfu ngeliviki.
Ihhotela likuvumela lezi zinhlobo ezilandelayo ukudla: zonke obanzi, ibhulakufesi nesidlo sakusihlwa, ibhodi ngokugcwele noma ibhulakufesi kuphela. Ngakho ungakhetha ukuthi yisiphi esifanelana nawe. Ehhotela zihlanganisa ichibi ongaphandle, ilanga ithala, ibha. eduze kakhulu kuyinto lolwandle yehhotela yangasese. Futhi kule "Siagas Beach" ungakwazi ukuqasha imoto noma ukubhuka uhambo. Ngaphezu kwalokho, Ihhotela likuvumela izivakashi zaso Ukudluliselwa eliqinisekisiwe sezindiza.
Siagas Beach Ihhotela 3 *: ikhambo Izibuyekezo
Uma uke waba phesheya, cishe uyazi ukuthi kubaluleke kangakanani ukuhlela uhambo lwakho kusengaphambili. Ngemva amaholide ondiza. Phakathi nalesi sikhathi, ngifuna ukubamba izinto eziningi futhi eziningi ukuvakashela kuphi. Futhi cishe ngeke abe ukuphumula umuntu ozimisele ukuyixazulula ezinye izinkinga zasekhaya futhi ubhekane nobunzima.
Ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukuba kahle ngaphambi kosuku okuhloswe ikhambo nje ukuwuqala ukubheka amathikithi endiza inzuzo futhi siqoqe ulwazi olumayelana nendawo lapho uya, kodwa futhi ukuba banake ngenxa kukhethwa ehhotela. Phela, uma wena awujabuli ehhotela, kungaba negate wonke esiqala emihle holidi.
Umthombo omkhulu wokwaziswa owusizo mayelana amahhotela izibuyekezo zezivakashi yangempela. Kuzo zichaza isipiliyoni sabo siqu abahlala ehhotela elithile. Ngenxa yalokhu, kuyoba lula ukuziqonda uma ilingane ihhotela elithile noma kunengqondo ukuqhubeka yokusesha. Namuhla sinikeza ndawonye ukufunda umbono lezihambi Siagas Beach Ihhotela 3 *.
Ngokushesha kufanele kuphawulwe ukuthi iningi bakithi abahlala "Siagas Beach" ngesikhathi iholide lakho eGrisi, abalithandayo Nangempela sawabona. Lokhu kungabonwa yiwo wonke ukubuyekeza isikolo, ihlanganiswe ngesisekelo ukuhlolwa yayo izivakashi. Ngakho, kuba 4 amaphuzu aphume a kungenzeka ezinhlanu. Ukwahlulela ukubuyekezwa, izivakashi eziningi ezifana Igumbi imishini futhi indawo ehhotela. Kodwa sifunda okwengeziwe konke.
Ngokuvamile, ngokuvumelana bakithi, Siagas Beach Hotel Ihhotela 3 *, ngokuba isabelomali, inikeza amakamelo izivakashi zayo ehlanzekile ukhululekile akukho frills. Lapha ngeke ukuthole ifenisha ezibizayo, imishini ultra-yanamuhla, a Jacuzzi futhi ulungiswe design. Nokho, amakamelo konke okudingayo ukuhlala ukhululekile. Ngokwesibonelo, ifenisha kanye nemishini lapha, yize akusito letinsha, kodvwa quality eyanele futhi zisesimweni ukusebenza. Uma ngokungazelelwe uqaphela ukwehluleka ke ngokushesha uyibike yokwamukela. Zonke izinkinga ziyoxazululwa ngokushesha ngangokunokwenzeka.
Ukwahlulela ngokubukeka izibuyekezo zezivakashi, Siagas Beach Ihhotela 3 * (Attica) ilungele labo abantu abangafuni kakhulu ukuchitha ku ehhotela, kodwa ihlela ukuchitha iholide, ujabulela iholidi beach bese evakashela izinto Greece. Ngo "Siagas Beach" ukuzijabulisa ekhethekile, ngaphandle ezinkulu amachibi ongaphandle kanye ilanga masimu, ngeke ukuthole. Nokho, plus elikhulu, kuyinto ukutholakala khulula Inthanethi engenantambo kulo lonke ihhotela. Ngakho, ungakwazi ukusebenzisa i-Wi-Fi egumbini lakho noma ogwini futhi "Siagas Beach" ezindaweni zomphakathi.
Leli dolobhana futhi ihhotela itholakala ethulile kakhulu nokuzola. Ngisho esitolo esiseduze kufanele unqobe ibanga cishe ikhilomitha elilodwa nesigamu. Kodwa lolwandle yehhotela yangasese nje ukuhamba iminithi kusuka emzimbeni eziphilayo. Ngakho-ke, uma ungathandi eziningi ukuhamba, musa uhlela ukuqasha imoto futhi ufuna ukuba seduze ehhotela ayenensada imigoqo, izindawo zokudla, izitolo kanye nezinye izingqalasizinda, kufanele cishe ukhetha kwenye indawo ukuze uhlale .
Ihhotela likuvumela izivakashi zayo ongakhetha eziningana yokudlela. Nokho, abahambi kakhulu belulekwa ukuba akhethe ibhodi isigamu (ibhulakufesi kanye dinner) uma ukubhuka. Ngakho, ungakwazi njalo ekuseni nakusihlwa ukudla yokudlela Siagas Beach Ihhotela 3 * (Greece). Emini, ngesikhathi esifanayo ngeke uboshelwe ehhotela ngokuya ukudla. Ngakho-ke wena uyakwazi uzame izitsha ezintsha ngesikhatsi Uhambo kanye izizinda. Kepha ukudla "Siagas Beach", izivakashi jikelele kubhekwe lamukeleke ngempela i ehhotela umnotho. Ngokwesibonelo, imenyu akuyona zahlukahlukene kakhulu, kodwa ungakwazi ngaso sonke isikhathi ukhetha into ukunambitheka yakho.
Ukwahlulela ngokubukeka amazwana lezihambi, isevisi kulolu ehhotela bona lingama wanelisekile. Nokho, ezinye izimenywa bathi izintombi zasemizini ngokuvamile alwela ukungena egumbini bese uqale bebutha, ngisho noma izivakashi sasingakafiki ushiye efulethini. Ngakho-ke, uma ungafuni baphazamiseke, qiniseka hang on emnyango ipuleti okuhambisanayo. Ngokuvamile, ngokuphathelene yokuhlanza, kuba impela izinga izivakashi babejabule. Ngokusho kwabo, izintombi zasemizini kanembeza bafeza izabelo zabo.
Futhi abantu bethu banake yokuthi izivakashi ezivela eRussia nakwamanye amazwe ayengaphansi kweSoviet Union ngaleso kancane. Mhlawumbe yilesi sizathu esenza izisebenzi ehhotela akakhulumi Russian. Ngokuqondene nalokhu, alungele yokuthi lapha une ukuba kuchazwe ngesiNgisi.
Cishe zonke izimenywa 'Siagas Beach "baphikisa ngokuthi Inzuzo enkulu yalo hhotela isondele ibanga ulwandle Ukuhamba. Ngakho, ebhishi yangasese ehhotela engafinyelelwa e umzuzu nje. Beach pebbly. Nokho, akukho amatshe amakhulu (kuhlanganise uma ufaka amanzi), izivakashi eziningi kangaka kalula ephethwe ngaphandle izicathulo ezikhethekile. Siagas Beach Ihhotela 3 * inikeza ebhishi yangasese. Ukusetshenziswa sun bed nezambulela, izivakashi can ngokuphelele mahhala. Ngaphezu kwalokho, loMfula "izinhlanzi ezinkulu»-Wi-Fi. Ukuze ukwazi ukuxhumana nabathandekayo babo eyasala ekhaya, ukusuka olwandle.
Emahhotela aphambili e-Bodrum (5 izinkanyezi): ukhethe futhi uphumule
Kempinski Hotel Aqaba Red Sea 5 * (Jordan / Aqaba): Izibuyekezo
Rafee Ihhotela 2 * (Dubai, UAE): incazelo, abahambi Izibuyekezo
Sochi Park Hotel kuyinto iholidi upscale ku yaseYurophu eRussia, futhi indawo Park Hotel Sochi ilungele kokubili ezokungcebeleka kanye ibhizinisi
Park Hotel "Ponds": ikheli, izithombe kanye nokubuyekeza
Valois amakhowe. Indlela ukupheka izitsha okumnandi kuzo?
Umuthi 'Viru-Merz ". Yokusetshenziswa
Ukulungiselela i-Vibrocil: ukubuyekezwa, izinkomba
Yekuchumana sendlela shintsha ikhasi isiqalo ku-Google Chrome
Okufanele ukwenze lapho yedwa. Lena isikhathi sokuzigedla noma kangcono hhayi ukushintsha esimisweni ingane?
I-accessory yokuhamba engalahleki - umcamelo entanyeni
Yini okufanele ibe umthandazo wezempilo yabantwana?
Tattoo "Taurus": incazelo, ukubaluleka, imidwebo
Solyanka nge ngibhema: iresiphi. Indlela ukupheka hodgepodge nge ngibhema
Umlingisikazi Oksana Skakun: Biography, empilweni yakho